ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီးအား အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ခေတ္တဆိုင်းငံမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီးအား အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ခေတ္တဆိုင်းငံမည်
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီးအား အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ခေတ္တဆိုင်းငံမည်
Posted by True Answer on Dec 24, 2011 in Myanma News, News |9comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက (၁၅)ပါးစုံညီ အစည်းအဝေးမှ ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားမည် ဖြစ်ပြီး လာမည့် တပေါင်းလ မှာ ပြုလုပ်မယ့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက (၄၇)ပါးစုံညီ အစည်းအဝေးမှာ ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီး၏ အသနားခံစာအား အားလုံးစုံညီ ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်…။
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီး နှင့် သံဃမဟာနာယက ဥက္ကဌ ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
လောလောဆယ် ဆိုင်းငံ့ထားစဉ်ကာလ၌ ရွှေညဝါပညာ့ဗိမ္မာန် ကျောင်းတိုက်၌ ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီး ဆက်လက်သီတင်းသုံး နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်…။
ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အားလည်း ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် ထားရှိပါတယ်..။ ထိုသို့ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားစာအား မနက်ဖြန်မှာ လာပို့ရန် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများမှ မိန့်ကြားလိုက်ကြောင်း လက်ထောက် ဆရာတော် ဦးသူရိယမှ မိန့်ကြားသွားပါတယ်…။
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီးသည် ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီးမှ တပည့်ဖြစ်သူ ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးအား ရဲရင့်တည်ကြည်တဲ့ “ခြင်္သေ့ကြီး” ဆိုပြီး အမြဲခိုင်းနှိုင်း အမည်နာမ သမုတ် ခေါ်တော်မူပါတယ်..။
ရွှေညဝါဆရာတော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ၄၇ပါးစုံညီ ထုတ်ပြန်ချက်…
အကြောင်းအရာ…. ရွှေညဝါဆရာတော်အား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ
အများ သိသင့်သည် ဟု ယူဆသဖြင့် သစ်လွင်ထူး ဘလော့မှ တဆင့်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အမှန်တရားအတွက် အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင် မီဒီယာအားမှာ အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းတွင်ပါဝင်နေကြောင်း ကျွန်တော်တို့နားလည်လျှက် မီဒီယာများအား တတ်နိုင်သမျှ ဘက်မလိုက်သော ယုံကြည်၇သော မီဒီယာများ ပေါ်ထွန်းလာအောင် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီကြပါစို့ ။
တရားကို နတ်စောင့်ပါတယ် … ကိုင်း … မီဒီယာအားကောင်းနေတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ ဘယ်လို အဆုံးဖြတ်မျိုးများဖြစ်မလဲ…. စိတ်ဝင်တစားစောင့်နေမိပါတော့တယ် ။
အဲဒီနတ်က စစ်တပ်အုပ်ချုပ်စဉ်တုန်းကတော့ မစောင့်ဘူးဗျို့။ အမေရိကန်ဝင်လာမှ ရောယောင်ဝင်လာတာ…
ခေါက်ဆွဲကြိုက်တဲ့ နတ်ပဲဖြစ်မယ် .. အဟဲ
ရဟန်းတွေအရာကို လူတွေက ဝင်ပြီးချဲ့ကားတော့ ရှုပ်ကုန်တာပေါ့
ဆရာတော်တွေရဲ့ စာတွေ ဝါတွေကိုလည်း နားလည်ကြမှပေါ့
ကိုယ့်ဘာသာ လိုသလို လိုက်အော်နေကြတာ
လက်လွှတ်စပါယ် လုပ်မလား ခင်ဗျားတို့လို ကိလေသာအတွေးဟိုကရှိတာမဟုတ်ဘူး
ဆြာတော်များကို ကျွန်ုပ် ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
( ဟမလေး ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်ပြန်ခေါ်ရတာ ရေတောင်ငတ်တယ် ရှည်ချက်ကတော့ )
အဟမ်း ( မကြောက်ပါနဲ့ ဖျဲပြဒါ )
NLD ကို အမေရိကန်လိုသဘောထား
သံဃာစုကို မြန်မာပြည်လို သဘောထား
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု့တွေထဲမှာ မြန်မာပြည်ဟာ
မြင်အောင်ကြည့်ပါ တွေ့အောင်ကြည့်ပါ ဖျဲကြည့်ကြပါ
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်ုပ် ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ၏ သတိပေးချက်ကို
ကျေးဇူး ထူးကဲလှကြောင်းဘာ ဖလာ့
မပူကြပါနဲ့ ဗန်းမော်ဦးကုမာရဆရာတော်ကြီးက တပည့်ကို ကယ်မှာပါ။ သူ့တပည့်ကို။ မကယ်ရင် ဆရာမကောင်း တပည့်ခေါင်းပေါ့။ တခြားသူဆိုရင်တော့ ကယ် မကယ်မပြောတတ်ဘူး။
(ဦးဘဇင်း လို့ မခေါ်ချင်ဘူး. အဆုံ3းကြောင်းမြောက် က အရေးအသားတွေကြောင့်)
သမုတိ သံဃာတွေမှာ ကိလေသာမြူ ဘယ်လောက်ထူမယ်ဆိုတာ ………
လက်လွှတ်စပါယ် လုပ်နိုင်ချေ များတာပေါ့( မီဒီယာအား မကောင်းရင် )
လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုကြသူ ၅သောင်းနီးပါး မျက်နှာ မကြည့်ရင်တောင်
(ပုံထဲက ကား အသစ်ကြီးမျက်နှာ ကြည့်မိသွားရင်တော့……)
မဟန ကလည်း ဆိတ် ဟိုဒင်း လိုပဲ
ဟိုဖက်ကပ်လိုက် ဒီဖက်ကပ်လိုက် နှင့် ။
အခု အစိုးရ ကော ၊ မဟန ကော ၊ တွေ့နေရတာက ၊
ပြည်သူ့ အသံနားထောင်တယ် ၊ ပြည်သူ့ အသံနားထောင်တယ် ဆိုပြီး ။
လူ ပြောများရင် ၊ ရှောင်ရှောင် သွားတာတွေ့နေရတယ် ။
အစိုးရ ကို သနားတောင် သနား လာပြီ ။
ပြည်သူ့ အသံနားထောင်တာ Generally ကောင်းပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လူအများ တောင်းဆိုတိုင်း ၊ ယူဆတိုင်း ၊
အမှန် ၊ တရားမျှတတယ် ၊ လိုက်လုပ်ရမယ် ၊ လို့တော့ မဟုတ်သေးဘူးနော် ။
ဥပမာ ဝန်ထမ်း လစာတိုး ကိစ္စပဲကြည့် ၊
သူရရွှေမန်း ပြောတဲ့ ကောင်းကောင်းပေး ၊ လာဘ်ယူရင်ဆော် ၊ မှန်တယ် ။
ဝန်ထမ်း လစာ တွေကလည်း တကယ် တိုးပေးသင့်နေပြီ ။
မှန်တယ် ။ လက်ခံတယ် ။
ပြည်ထောင်စုကော ၊ ပြည်နယ်တွေပါ ၊ ဘတ်ဂျက် လိုငွေ အကြီးအကျယ် ပြနေတဲ့ ။
နိုင်ငံခြား ကြွေးမြီ 11 Billion Dollars တင်နေတဲ့ ။
သူများ နိုင်ငံမှာ ၁၀ ယောက် ထဲ နှင့် လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို
အစိုးရဝန်ထမ်း အယောက် ၂၀၀ လောက်က ဝိုင်းလုပ်နေတဲ့ ။
အဲဒီ ပိုလျှံနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ဖြုတ်မပြစ်ရဲပဲနှင့် ။
အစိုးရက ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွန်တွေကို
ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် မကောက်နိုင် ၊ မကောက်ရဲပဲနှင် ။
မနက်ဖြန်ပဲ ရတော့မလိုလို ၊ သဘက်ခါပဲ ရတော့မလိုလို ၊
နိုင်ငံတကာက အကူ အညီတွေ နိုင်ငံထဲ တကယ် မရ သေးပဲနှင့် ။
ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လစာတိုးနိုင်မှာလည်း ။
တဖြေးဖြေးချင်း အပေါ်ကဟာတွေ ပြောင်းလဲပြီးမှ တိုးလို့ ရမပေါ့ ။
အခု ဥရောပ ၊ ဂရိ မှာဖြစ်တာပဲကြည့်လေ ၊
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမတ်မင်းများက ၊
ပြည်သူ လူများစု အကြိုက် ၊ ငါ မဲ ရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး ၊
တိုင်းပြည် စီးပွားရေး အခြေမခိုင်ပဲ နှင့် ၊
အလုပ်သမားတွေကို အခွင့်အရေးတွေ ပိုပေးမိတာ ၊
အခု နိုင်ငံပါ ဒေဝါလီခံရ ( Default ) တော့မယ် ။
ပြည်သူ့ အသံနားထောင်တာထက်စာရင် ၊
နိုင်ငံ့ အကျိုးကို တကယ်လိုလားတဲ့ ၊ အဂတိ ကင်းရှင်းတဲ့ ၊
ပညာတတ် အစစ်ကြီးတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်တာကမှ ၊
တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုး ပိုရှိမယ် ထင်မိတယ် ။
Sorry ပါဗျာ Post အဟောင်းကြီးမှာ မန့် လိုက်မိတယ် ။